Phuket Sandbox: Mitarika ny fiverenan'ireo mpizahatany eropeana any Thailand ny UK
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Thailand » Phuket Sandbox: Mitarika ny fiverenan'ireo mpizahatany eropeana any Thailand ny UK
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Vaovao Mafana Thailand • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao farany momba ny UK • Vaovao isan-karazany
Nanapa-kevitra ny governemanta UK fa tsy hampihatra ny fameperana karokantin amin'ny mpandeha miverina avy any amin'ny firenena amin'ilay antsoina hoe "Amber List", izay misy an'i Thailand.
Ny paikadin'i Phuket Sandbox dia napetraka mba handinihana sy hamakafakan'ny sasantsasany amin'ireo arsitektaviny sy mpiray antoka aminy.
Ny tsenan'i UK dia mitarika ny fiverenan'ireo mpandeha eoropeana miaraka amin'ny 12% amin'ireo 4,568 tonga amin'izao fotoana izao.
Efitrano fandraisam-bahiny 168,862 no namandrihana tamina trano fandraisam-bahiny 305 ho an'ny isan'ny mpitsidika 14,844, araka ny angom-pahefana momba ny fizahan-tany ao Thailand.
Rehefa mipoitra ny marika tapa-bolana hatramin'ny nanokafana ny iray amin'ireo tanjona fitsangatsanganana be indrindra eran'izao tontolo izao, ny sahy Phuket Ny teti-pitrandrahana sandbox dia manombatombana sy manadihady ny sasany amin'ireo arisitra sy mpiray antoka aminy.
Ny valim-pikarohana lehibe hatreto dia ny tsenan'i UK dia mitarika ny fiverenan'ireo mpandeha eropeana miaraka amin'ny 12% amin'ireo olona nahatratra 4,568 tonga hatramin'ny daty (11 Jolay) avy any Angletera - ny filazan'ny mpanara-maso ny indostria dia porofon'ny fifandraisana efa ela teo amin'ny UK sy Phuket, fidirana mivantana avy any London Heathrow mankany Phuket International ary mitaky ny fangatahana.
Ity tarehimarika ity dia nohamafisina bebe kokoa tamin'ny fanapahan-kevitry ny governemanta UK tsy hampihatra ny fameperana karokantin amin'ny mpandeha miverina avy any amin'ny firenena amin'ilay antsoina hoe "Amber List", izay misy an'i Thailand. Ity politika ity dia voalaza fa nitarika fitomboan'ny 23% tamin'ny famandrihana fialantsasatra avy any ivelany nataon'i Brits.
168,862 ny totalin'ny efitrano fandraisam-bahiny voavidy manerana trano fandraisam-bahiny 305 ho an'ny isan'ny mpitsidika 14,844 sy salan'isa 11-alina hijanonana, araka ny Fahefan'ny fizahantany any Thailand data amin'ny 11 Jolay.
Ny famoronana sy ny fampiharana ny Phuket Ny Sandbox dia ezaky ny fiaraha-miasa eo amin'ny sehatra tsy miankina sy tsy miankina, ary ity latabatra boribory virtoaly ity dia hotarihin'ireo solontena avy amin'ny sehatry ny fizahan-tany, ny fandraisam-bahiny ary ny fiaramanidina, miaraka amin'ireo mpandinika indostrialy sy ireo manam-pahaizana momba ny varotra.
"Dingana an-jaza io, saingy mamporisika antsika ny famantarana hatreto," hoy i Ravi Chandran, Tale mpitantana ny Laguna Phuket. "Ny tsena UK dia namaly haingana na dia eo aza ny vanin-taona fahavaratra UK ary faly izahay miarahaba ny Brits izay ho anay 20 hotely no mahatratra XNUMX% ny fahatongavanay hatreto. Tsena lehibe hafa koa dia i Thailand, Etazonia, UAE ary Israel. ”
Ny fizahan-tany rehetra any Phuket dia mila mandalo fitsapana PCR matetika. Mba hahafahana manao izany, Laguna Phuket dia niara-niasa tamin'ny hopitaly Bangkok Phuket vao haingana hanangana ivon-toeram-panadinana eken'ny sehatra iraisam-pirenena ao an-tokotaniny, izay misy hotely fito.